Nagu saabsan - Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd.
Yaraynta Isku -xirka
Hoos u dhig
Ku takhasusay Ductile Iron Grooved Fepe Fittings and Copplings for Fire Fire
Shandong Zhihua Industry Pipe Industry Co., Ltd, oo la aasaasay 2007, waxay ku takhasustay Ductile Iron Grooved Pipe Fittings iyo Couplings for Fire Fire. Waxay ku taallaa “Kite World Capital” Weifang City oo loo yaqaan saldhigga wax -soo -saarka Beeraha Grooved Chinese oo ku dhegan dekedda Qingdao.
Shirkadda La Sameeyay
Zhihua waxay dhaaftay nidaamka maaraynta tayada ISO9001 iyo alaabteeda jeexan waxay heshay oggolaanshaha FM & U L & CE waxaana loo heli karaa OEM / ODM ee macaamilka. Maalmahan, shirkaddu waxay leedahay afar warshadood oo leh 1000 shaqaale xirfad leh iyo laba summadood:WFHSH ® ™ & FANGAN ® ™ & SHUNAN® ™, oo daboolaya aag dhan 100000 mitir murabac.
Hal -abuurnimadu ma dhammaato, cilmi -baarista iyo horumarintu marna ma joogsadaan.
Zhihua waa mid caan ah oo sumcad sare ku leh macaamiisha iimaankeeda, tayada, qiimaha iyo adeegga. Badeecooyinkeeda jeexjeexan ayaa lagu iibinayaa dhammaan 300 oo magaalo oo Shiinaha ah waxaana loo dhoofiyay Dawlad -goboleedka, Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika, Koonfur -bari, Kuuriya, Yurub Ect.
Zhihua waxay leedahay afar aqoon-is-weydaarsi wax-soo-saarka ugu weyn oo loogu talagalay alaabada shubka: aqoon-isweydaarsiga otomatiga ah, aqoon-isweydaarsiga mashiinka, aqoon-isweydaarsiga rinjiyeynta iyo aqoon-isweydaarsiga wax-u-dhiska. Warshadaha Zhihua waxaa lagu qalabeeyay tas -hiilaadka iyo qalabka ugu horumarsan ee warshadaha. Xarumaha wax -soo -saarka ugu weyn waxaa ku jira 8 ugu fiican 416 khadadka wax -soo -saarka toosinta tooska ah; Faransiiska FONDARC 180T isku -darka ciidda otomaatiga ah, kaas oo ah kuwa isku -darka ugu fiican adduunka. 6 Foornooyinka korontada ee dhexdhexaadka ah, 8 xarumaha mashiinnada wax -ka -beddelka CNC, 150 CNC lathes for Thread & Groove, 2 khadadka dahaarka ee korontada, 5 khadadka mashiinka epoxy & rinjiyeynta mashiinka rinjiyeynta, kaas oo awoodda sannadlaha ahi dhaaftay 100000 tan.
Sanadka 2019, Zhihua waxay dhistay warshad dab -demis, oo soo saari karta 4 milyan oo dab -bakhtiiye sannad walba, maalgashiga guud wuxuu ka badan yahay 20 milyan oo RMB, oo inta badan soo saarta dab -bakhtiiyeyaasha la qaadan karo, dab -demiyayaasha kaarboon laba ogsaydhka la qaadan karo iyo alaabo kale. samaynta Valve, hydrant gudaha, biyo -hawo dibadeed, adaporka bamka dabka iyo alaabooyinka kale ee ka -hortagga dabka.
Waxyaabo badan ayaa is beddeli kara, laakiin ballanqaadkeenna xagga xirfadda, tayada iyo adeegga macmiilku ma beddeli doono. La xiriir Zhihua si aad u bilowdo kaydinta waqtiga iyo kharashka.
“Kulankii Kick-off Project” ee Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd. iyo Weifang Huabao Makiinado Co., Ltd. ayaa si guul leh loo qabtay
Shirkii kooban ee muddada-dhexe ee Shandong Zhihua Industry Pipe Industry/Huabao Mashruuca Dhiirrigelinta Makiinado Leh ayaa si guul leh loo qabtay
Degmada Fangan, Degmada Fangzi, Magaalada Weifang, 262123 Shiinaha.